Keen Skuulan | maktabadda | Af-Soomaaliga
Tag Archives: Keen Skuulan
Qoraaga iyo Tarjumaha
17/01/2017 Halgankii Yoonis MaskiinKeen Skuulanmaamule
Ken Schoolland waa macallin dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda, waxa uuna macallin ka yahay Jaamacada Hawaii Pacific University. In- tii uusan macallin ka noqon jaamacadaas, waxa uu ahaa Agaasimaha Cilmiga Sayniska iyo Barashada Ganacsiga Jabaan, Chaminade ee Jaa- macada Honolulu iyo Madaxa Ganacsiga iyo Dhaqaalaha ee Kulliyadda Hawaii Loa.
Markii uu ka soo qallin jabiyay Jaamacadda Georgetown, waxa uu xil ka soo qabtay isagoo ku shaqaynaya dhaqaale yaqaan caalami Waaxda Ganacsiga Caalamiga ee Wasaarada Ganacsiga ee Dawlada Maraykanka, iyo isagoo ahaa u qaybsanaha Aqalka Cad, xafiiska wakiilka gaarka ah ee heshiisiinta ganacsiga caalamiga.
Schoolland waxa uu shaqada dawlada uga tagay in uu noqdo macallin, is¬agoo macallin ka noqday dugsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Kulliyadda Sheldon Jackson ee Alaska. Waxa kale oo uu wax ka dhigay Jaamacadda Hakodate ee ku taala wadanka Jabaan. Waxa kale oo uu qoray buug, Shogun’s Ghost: The Dark Side of Japaneses Education, kaasoo lagu daabacay af-Ingiriis iyo af-Jabaniis.
Schoolland waa xubin ka mid ah madaxda sarsare ee ururka International Society for Individual Liberty iyo isagoo ah aqoonyahan ka mid ah Sam Watton Fellow for Student in Free Enterprise.
Faysal Axmed Xasan waa qoraa. Buuggiisii ugu horreeyay waxa uu qoray sannadkii 2000. Buuggaas oo magaciisa la yiraahdo Maandeeq. Waxa uu maqaalo faro badan ku qoray wargaysyo badan oo ay ka mid yihiin New African Magazine, Hanad Magazine, Wargayska The Somali Link Newspaper, Wargayska Somali Voice iyo shabakada Internetka:
Faysal waa suxufi horay uga soo shaqeeyay barnaamijka Codka Beesha Soomaalida ee China Radio International iyo Radio Scerdo International.
Luqadaha Kala Duwan ee Lagu Daabacay
Ruush, Dhaj, Noorwiijiyaan, Litiiwiiniyaan, Roomeeniyaan, Seerbiyaan, Karooweeshiyaan, Maasedooniyaan, Isloofiiniyaan, Jarmal, Paluuniyaan, Shi- ine, Albaaniyaan, Laatiifiiniyaan, Boortigiis, Hangaariyaan, Talyaani, Roomaan, Jeek, Boolish iyo Jabaaniis.
“Buuggani waxa uu soo bandhigayaa mabaadiida bud-dhigga u ah aasaaska dhaqaalaha, oo si aad u sahlan loo qoray. Waana mid si qiyaas wacan leh loo diyaariyay oo qiimo weyn ku fadhiya. Shaqo aad u sarraysa”
MILTON FRIEDMAN ku guulaystay billada dhaqaalaha ee caalamka, ahna Nobel Laureate-kii dhaqaalaha
“Waxaan berigii hore aaminsanaa wax barashadu waxa keliya oo ay ku koobnayd buuggaagta dugsiga loogu talagay macalimiin qaboow oo dhidid badan…Waxaanse hadda ogaaday buuggani in uu xambaarsan yahay macluumaad aad u sarreeya oo aan intii aan noolaa aan horay u arag. Waxaan ka bartay tacliin aad u sarraysa buuggan oo ku saabsan suuqyada madax bannaan, hanti yeelashada, isdhaafsiga fikradaha, wax kala iibsashada, taasoo aanan baran intii aan noloshayda dugsi dhiganay, marka laga soo bilaabo dugsigii sare iyo imminka oo aan ku jiro jaamacad.”
“…Buug aad u sarreeya oo kor u qaadaya aqoonta dhallinyarada da’da yari u yeelan karaan suuqyada madax banaan…”
qoraagii buugga Capitalism for Kids
“Buuggaagu waa buug aad u qimo badan! Waa ogaansho aad ogaatid xorriyaddaada.”
Madaxweynaha, Ururka International Society for Individual Liberty
“Waa buug aad u sarreeya!…Waa uu ka muuqdaa raadkii Bastiat, von Mises, iyo Pat Paulsen.”
GENE BERKMAN iska leh xarunta buuggaagta ee Renaissance
“Mabaadiida bud-dhigga u ah suuqyada madax bannaan ayaa lagaga xaajooday buuggan, kuwaasoo faa’iido weyn u leh cid walba oo doonayso in ay dhisto bulsho xor ah.”
VIRGINIJUS DAUKAS Madaxweynaha, Free Market Foundation, Liitiwiiniyaan
“…Dhab ahaatiin waa qoristii ugu qiimaha badnayd oo si aad u sarrayso loo qoray, si sahlana loo fahmi karo mabaadiida la dayacay ee ku saabsan xorriyada iyo suuqyada madax bannaan.”
NICOLAI HEERING xubin ka mid ah xisbiga Libertas Society, Deenmaak
“Buug qiimo weyn. Wakhti ay jiilasha soo koraya badankoodu ay xiiso weyn u hayaan buuggaagta majaajilada, filimada laga sameeyay kaartuunka iyo buuggaag farshaxan culus loo yeelay, sida aad u qortay buuggaaga waa sida ugu wacan ee lagu horumarin karo suuqyada madax bannaan.”
MACALLIN TOSHIO MURATA Madaxweynaha, Kulliyadda Ganacsiga ee Yokomaha, tarjumayna Human Action uu qoray Ludwig von Misses, Jabaan
“Waa buug rajo weyn xambaarsan…!”
MATS HINZE Wax ka aasaasay Tritnaha, Swiidhan
“Buuggan waa uu kaa qoslinayaa, laakiin waa uu ka shaqaysiinayaa maskaxddaada. Waa buug si aad iyo aad u sarrayso loo qoray.kuuna fududaynaya fahamka mabaadiida bud-dhigga u ah suuqyada madax bannaan iyo bulsho xor ah.”
VALENTINA BUXAR Fundatia Liberala, Roomaaniya
“Aqiidada mawduucan buuggan laga xaajoonaya waxay qaadan lahayd in laga qoro buuggaag badan iyo abaabul doodo faro badan oo socon lahaa sannado dheer, ayaa si fudud looga xaajoonayaa iyadoo qaadanaysa wakhti yar. Waxaan doonayaa in aan nuqulyo u diro dhamaan xubnaha Free Democrats.”
JON HENRIK GILHUS International Secretary, Free Democrats, Noorway
“Si wacan baanu buuggan u isticmaalnay si aanu ardayda ugu dhigno mabaadiida bud-dhigga u ah xorriyada.”
Guddoomiye, Dutch Libertarian Centre, Dalka Dajka
“Mahadsanid, mahadsanid, Waad ku mahadsan tahay buuggan qiimaha badan!
Waa ay qiimo badan tahay in aan akhriyo buug si wacan isu wada haysta oo aqli gal ah, madadaalo badan iyo isagoo ku baraarujinaya… Sheekada waxaa laga alifay dhul aan jirin, haddana sheekada buuggu waa mid runta u dhow. Mar kale waad ku mahadsan tahay buuggan qiimaha badan!”
STUART HAYASHI 1999 Valedictorian, Dugsi Sare ee Mililani, Hawaii
“Aad iyo aad ayaan ugu riyaaqay buuggaaga: Halgankii Yoonis Maskiin. Si aan runta kuugu sheego xoogaa yar baad i cabsiisay sida uu dhabta ugu dhow yahay ee aad si fiiqan u abaartay.waxa keliya ee aan ku fikiri karaa waa intee in le’eg ayaa joogaysaa Boolaan! Waa mucjiso – markii aan buugga akhrinayay waxaan mooday – tani waxay ila noqotay iyadoo dib wakhtigii hore loogu noqday waa intii ka horeeysay sannadkii 1989.”
MONIKA LUKASIEWICZ, MAAMULAHA MASRIXIYEEDKA Liberty English Camp, Warszawa, Boolaan
“…Nuxurka sheekaxariirta buugga oo ah mid ku saleeysan sheekooyin goo-goos ah oo dacaayadeeynaysa siyaasadaha iyo hab-dhaqameedka dowladeed ee faragelinta ku haya suuqyada ganacsiga-xorta-ah. Haddaba, sida ay ila tahay, ujeeddada buuggan uu u tarjumay qoraa Faysal waxa ay tahay in uu ku dhiirageliyo ama baro dhallinyarada Soomaaliyeed “fikradaha xorta ah” – siiba gaar ahaan dhallinyarada doonaysa in ay noqdaan ganacsato ama siyaasiyiin.”
CABDIFATAAX SACIID ISMAACIIL aqoonyahan takhasus dheer u leh cilmiga siyaasadda.
Ururada Habboon in aad Macluumaad Dheeraad ah Kala Xiriirtid
ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMENT,
1202 N. Tennessee St. Suite 202, Cartersville, GA 30120, USA Telefoon: 770-386-8372; Fax: 770-386-8373, www.self-gov.org
1000 Massachusetts Ave. N.W., Washington, D.C., 20001-5403, USA Teleefoon: 202-842-0200, Fax: 202-842-3490, www.cato.org
30 South Broadway, Irvington, NY 10533, USA. Teleefoon: 914-591-7230; Fax: 914-591-8910; www.fee@fee.org
1601 Valley Forge, Valley Forge, PA 19482, USA, Teleefoon: 610-933¬8825, Fax: 610-935-0522, www.ffvf.org
11350 Random Hiils Road, Suite 800, Fairfax VA, 22030, USA, Teleefoon: 703-934-6101, Fax: 703-352-8678, www.fff.org
INSTITUTE FOR HUMANE STUDIES,
George Mason University, 3401 N. Fairfax Drive, Arlington, VA, 22201¬4432, USA Teleefoon: 703-993-4880 ama 800-697-8799, Fax: 703-993¬4890, www.TheIHS.org
INTERNATIONAL SOCIETY FOR INDIVIDUAL LIBERTY,
836-B Southampton Rd. Suite 299, Benicia, CA, 94510, USA, Teleefoon: 415-864-0952, Fax: 864-7506, www.isil.org
LAISSEZ FAIRE BOOKS,
942 Howard St., San Francisco, CA 94103, USA, Teleefoon: 415-541¬9780, Teleefoon bilaash ah (Toll-free): 800-326-0996, Fax: 415-541-0597, www.laissezfaire.org
LIBERTY MAGAZINE & FOUNDATION,
1018 Water St., Suite 201, Port Townsend, WA 98368, E-mail: rwbrad- ford@bigfoot.com
518 W. Magnolia Avenue, Auburn, Alabama 36832-4528 Teleefoon: 334¬321-2100, Fax: 334-321-2119, www.mises.org
THE OBJECTIVIST CENTER,
11 Raymond Ave., Suite 31, Poughkeepsie, NY 12603 Teleefoon: 914-471¬6100, Fax: 914-471-6195, toc@objectivistcenter.org
REASON MAGAZINE & FOUNDATION,
3445 S. Sepulveda Blvd., Suite 400, Los Angeles, CA, 90034, USA, Teleefoon: 310-391-2245, Fax: 310-391-4395, www.reason.org
THE PALMER R. CHITESTER FUND, 9008 Main Place, Suite # 3, McKean, PA, 16426 Teleefoon: 888-242-0563; Fax: 814-476-1283, www. prcfund.org/stossel/
Buuggaagta habboon in aad akhrisid
Burris, Alan, A liberty Primer
Friedman, David, The Machinery of Freedom
Friedman, Milton & Rose, Free to Choose
Grant, R. W., The Incredible Bread Machine
Hazlitt, Henry, Economics in One Lesson
Rothbard, Murray, For a New Liberty
Ruwart, Mary, Healing our World
Tennehill, Linda & Morris, The Market for Liberty
Thoreau, Henry David, On the Duty of Civil Disobedience
Wixii faahfaahin dheeraad ah ee nuqulyo kale, la xiriir:
Small Business Hawaii, Hawaii Kai Corporate Plaza, 6600 Kalanianaole Hwy., Suite 212, Honolulu, Hawaii, 96825 Teleefoon: 808-396-1724, Fax: 808-396-1726, sbh@lava.net www.smallbusinesshawaii.org
Waxaan mahad gaar ah u celinayaa qoraaga buuggan, Ken Schoolland oo ogo- laaday in buuggan loo tarjumo af-Soomaali. Sidoo kale waxaa mahadcelin iga mudan Cabdifataax Saciid Ismaaciil oo akhriyay tuduc kasta oo buuggani ka kooban yahay, tallooyin wax ku ool ahna ka bixiyay iyo isagoo maqaal uu si huffan ugu soo koobaya akhristaha cilmiga siyaasadda iyo aqoonta dhaqaalaha ee buuggani xambaarsan yahay. Cabdifataax Saciid Ismaaciil waa aqoonyahan aqoon dheer u leh cilmiga siyaasadda.
Buuggan waxaa laga soo tarjumay luuqadda af Ingiriiska. Magacyada uu qoraagu isticmaalay waxay ahaayeen kuwo ku salaysan magacyo af Ingiriis ah. Magacyadaas oo dhan waxaan u bedelay magacyada ay la baxaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya, Kiinya, Itoobiya, iyo Jabuuti. Maga- cyadaasi qaarkood asal ahaan waxay ka soo jeedaan magacyada Carabtu la baxdo iyo kuwo asal ahaan u gaar ah dadka Soomaaliyeed. Halkaan waxaan ku soo koobayaa magacyaddii qoraagu uu horay u isticmaalay iyo kuwa hadda aan u bedelay.
Buuggan magaciisa af-Ingiriisiga ah waa The Adventures of Jonathan Gullible: A Free Market Odyssey. Buuggan magaciisa af-Soomaaliga ahi waa Halgankii Yoonis Maskiin: Taxanihii Suuqa Madax Bannaan. Hoos waxaan ku soo koobayaa magacyada uu isticmaalay qoraagu iyo kuwo aan anigu u bedelay:
Af Ingiriis – Af Soomaali
Jonathan Gullible – Yoonis Maskiin
Lady Tweed – Marwo Ashkira
Wilhem – Faarax
Hilda – Dhaqan
Jack – Jaamac
Carlo Ponzi – Cali Bucur
Alan – Caamir
Louise – Ladan
Julia Pavlov – Faroow Macalin
Joe – Madaxeey
Ins – Filsan
Boonzi – Wadacas
Arthur Hatch – Sooyaan Geedi
Charlie – Muuse
Paul – Fanax
Carlo – Liibaan
Boobie – Xuseen
Mary Jane – Firdoos Cali
rl (the Terrible Tiger) – Kuuloow
Marlow – Adag
Sonny – Daahir
Steredore – Xoogsade
Corrumpo – Booliqaran
Phil – Axmed yare
Phoeba Simon – Deeqa Ciise
Miss Simon – Marwo Deeqa
Jiyo – Warsame
Shar – Warsan
El Saddamadore – Jasiiradda Xaasidka
George – Ibraahim
Seldon – Warbadanle
Dr. Abigail Flexner – Dr. Xaawo Geedi
Lady Whitmore – Marwo Maryan
Annie – Aragsan
Sherriff of Nottingham – Duqa Amni-ilaalinta ee Wad
Rita – Cawo
Hubert – Qafaar
Gompers – Birtun
Isle of Nie – Ceel Macaan
Uncle Sam – Adeer Samta
Xmas – Ciid weyn
Eliihu Root – Tixsi san ka taabte
Faysal Axmed Xasan.
Tarjumaha buugga. Halgankii Yoonis Maskiin: Taxanihii Suuqa Madax Ban- naan.
Faallo ka Bixin
Qoraa Faysal Axmed Xasan, oo deggan magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaa uu si huffan oo cajiib ah ugu tarjumay afka Soomaaliga buugga caanka ah ee la yiraahdo The Adventures of Jonathon Gullible: A Free Market Odyssey
– qorayna professor Ken Schoolland oo wax ka bara Jaamacadda Hawaii Pacific University. Nuxurka sheekaxariirta buugga oo ah mid ku saleeysan sheekooyin goo-goos ah oo dacaayadeeynaysa siyaasadaha iyo hab-dhaqameedka dowladeed ee faragelinta ku haya suuqyada ganacsiga-xorta-ah. Haddaba, sida ay ila tahay, ujeeddada buuggan uu u tarjumay qoraa Faysal waxa ay tahay in uu ku dhiirageliyo ama baro dhallinyarada Soomaaliyeed “fikradaha xorta ah”, ideas of liberty – siiba gaar ahaan dhallinyarada doonaysa in ay noqdaan ganacsato ama siyaasiyiin. Sheekada buuggan oo lagu tarjumay in ka badan shan iyo labaatan afaf, Faysal waxaa uu si cad oo aan mugdi ku jirin ugu tarjumay af Soomaali dhacdooyinka goos-gooska ee buugga, kuwaasoo badankoodu yihiin kuwa ifinaya waxyaabaha faraha badan ee aan sida dhabta ah loo fulin karin
– sida caydha (welfare) iyo waxbarasho lacag la’aan ah (public education).
Xudunta sheekada buugga waa mid si sahlan loo dejiyay: nin dhallinyaro ah oo la yiraahdo Yoonis Maskiin oo doon yari ku shiraacayo ayaa duufaan xooggan ku tuureysa, isaga iyo doontiisaba, jasiirad uu la yaabay oo la yi- raahdo Booliqaran. Yoonis Maskiin waxa uu halkaasi kula kulmayaa dad ay u taliso dowlad awood sheegasho badan oo faragelin iyo xukumid ku haysa nolol maalmeedka dadka, ha ahaato canshuur qaadid iyo dejin sharciyo maandhaaf lehba. Waxyaabaha uu ka bartay Yoonis Jasiiraddan yaabka leh waxaa ka mid hantiwaaag-ku-sheegga ay dowladda sharciyaysay oo runtii carqalad ku ah kobcinta wax soo saarka dadka. Dowlad-ku-amartaaglaynta noocan ahi waa mid ay dadka Soomaaliyeed ay yaqaaniin oo ay haddaba haysato. Sidaa darteed, waxaan ku guubaabinayaa in akhristayaasha Soomaaliyeed, yar iyo weynba, in ay akhristaan buuggan maaweelada iyo wacyi gelinta badan.
Cabdifataax Saciid Ismaaciil, waa aqoonyahan aqoon dheer u leh Cilmiga Siyaasadda. Toronto, Kanada.
Waxaan u mahad naqayaa intan hoos ku qoran deeqdooddii ay u fidiyeen mashruucan: Sam Slom iyo Ganacsatada yar yar ee Hawaii sida ay daaba- caadan uga dhigeen mid dhamaystiran. Flora Ling, faalladiii ay ka bixisay habka uu buuggu u qoran yahay iyo guud ahaan sida sheekadan loo soo band- higay. Lucile Schoolland, Nicolai heering, Fred James, Harry Harrison, Scott Kishimori, iyo Stuart Hayashi sidii qiimaha wacnayd ee ay faallada uga bixiy- een buuggan. David Friedman iyo Tiffany Catalfano farshaxankoodii aadka u wacnaa, ahaana kii ugu horeeyay. Orlando Valdez waxa uu diyaariyay taageero farshaxanadeed iyo habka loo daabacay. Gerhard “Geo” Olsson waxa uu ku deeqay fikrado faro badan oo bud-dhig u ahaa falsafadda buuggan xambaarsan tahay iyo isagoo buuggan baray Milton Friedman. Vince Miller iyo Jim Elwood xayeeysiintoodii buuggan adduunka intiisa kale; Louk Jongen, Louise Van Gils, Reg Jacklin, Pelle Jensen, Jeff Mallan, iyo dhamaantood kooxda HPU SIFE xayeeysiintoodii buugga ay ugu sameeyeen shabakada Internetka.
Hubert & Rita Jongen, Wimmie Albada, iyo Ton Haggenburg daabacaadoo- dii af-Dhajka. Dmitrii Costygin iyo William Milonoff daabacaadoodii koowaad ee af-Ruushka iyo Kenneth DeGraaf iyo Elena Mamontova waxay suurta geliy- een daabacaadii ugu dambaysay. Linda Tjelta, Jon Henrik Gilhus, iyo Bent Johan Mosfjell waxay suurta geliyeen daabacaadii af-Noorwiijiyaanka. Vir- gis Daukas waxa uu suurta geliyay daabacaadii af-Luutiniiniyaanka iyo isa- goo casharadiisa af-Ingiriiska u isticmaala buugga, iyadoo ay ku taageeraan Monika Lukasiewicz iyo Stephen Brownie. Tomislav Krsmanovic daabacaadi- hii afafka Seerbiyaanka, Masedooniyaanka, Koroweeshiyaanka, Isloofiyaanka, Albaaniyaanka, iyo Roomaano. Trifun Dimic waxa uu tarjumay, daabacayna af-Roomaanka. Valentina Buxar iyo Cris Comanescu waxay tarjumeen daaba- caadii af-Roomaaniyaanka. Valdis Bluzma waxa uu daabacay af-Laatfiiniyaanka Wilson Ling iyo Carlos Fernando Souto daabacaadoodii af-Boortigiiska. Toshio Murata, Yoko Otsuji, Toyoko Nishimura, Mariko Nakatani, Kayoko Shimpo, iyo Hiroko Takahashi waxay suurta geliyeen tarjumidii iyo daabacaadii af- Jabaaniiska, waxaana daabacday shirkada Nippon Hyoron Sha. Alex Heil ayaa u tarjumay af-Jarmal iyo iyadoo Stefen Kopp uu daabacay daabacaadii af- Jarmalka. Jonas Ekebom, Carl Hennigsson, Christer Olsson, iyo Mats Hinze dhamaantood waxay ka shaqeeyeen tarjumaadii af-Swiidishka iyo iyadoo John- Henri uu diyaariyay daabacaad lagu daabacay shabakad Internetka. Jan Jacek Szymona, Jacek Sierpinski, iyo Andrzej Zwawa daabacaadiisii af-Boolishka. Andras Szijjarto daabacaadiisii af-Hangaariyaanka. Judy Nagy tarjumaadeedii iyo daabacaadeedii af-Isbaanishka. Joy-Shan Lam waxa uu suurta geliyay daabacaadii Wargayska Hong Kong Economic Journal. Zef Preci, Kozeta Cuadari, iyo Auron Pasha soo saaristeedii af-Albaaniyaanka. Christina Sakaziro Posegate iyo Winston Posegate soo saaristoodii Baluuniyaanka. K-mee Jung waxa uu tarjumayaa af-Kuuriyaanka. Barun Mitra waxa uu u tarjumay af- Bengaaliga. Loiuse Zizka waxay u tarjuntay af-Faransiis iyo taageeridii Patrick
Trepanier iyo Jacques De Guenin waxay baadigoob ugu jiraan daabacad. Aldo Canovari soo saaristiisii af-Talyaaniga. Josef Sima iyo Radovan Kacin waxay suurta geliyeen daabacaadii af-Jeeka. Faysal Xasan waxa uu u tarjumay af- Soomaali. Andy Nousen waxa uu diyaariyay daabacaadii Esberaanto. Nellie Manova wuxuu diyaariyay daabacaadii af-Bulgaariyaanka. Seig Pedde wuxuu soo saaray CD af-Bulgaariyaan ah.
Dad aad u faro badan ayaa ka shaqaynaya daabacaadyo lagu daabacayo luuqado kale gedisan kuwaas waxaa ka mid ah: Susan Wells, Cindy iyo Mike Powell, Vanja Dejong, iyo Tracy Ryan. Doug Thorburn, Danute, Venta, & Vy- tas Baraukas, Lane Yoder, Dick Rowland, iyo dadkii faraha badan ee dhaqaalo badan ugu deeqay iyo kafiil noqoshadoodii lacageed ee daabacaadii Caalamka. Taageero kalena waxaa mashruucan qayb weyn ka qaatay: Mark Adamo, Michael Beasley, Glenn Boyer, Charles Branz, Rodger Cosgrove, John Dalhoff, Jean Frissell, Henry Haller III, Thomas Hanlin III, Frank Heemstra, David Hoesly, Douglas Hoiles, Paul Lundberg, Jim Mcintosh, Denise iyo William Murley, Roger Norris, Richard Rieman, Jim Rongstad, David Stiegelman, Rudy Tietze, Howard Thomson, Susan Wells, iyo Louise Ziska. Dale Pratt dhiirigelintiisii ugu horayntii aan ka sii daayay Idaacadda; Lane Yoder, Nat Mandel, Bruce Hobbs tallo bixintoodii iyo taageeridoodii. Rock Johnson, Jim & Vy Atchison, Derrick Hatami, Fred James, David Cummings, Robert Sator, iyo Khaasatan Fran Slom faallooyinkoodii iyo caawimaaddii soo saaridnimo; Adam Smith, Fredric Bastiat, Milton, Rose, & David Friedman, Ayn Rand, Duncan Scott, Dick Randolph, Henry David Thorean, Murray Rothbard, Lysander Spooner, Fyodor Dostoyevsky, George Orwell, Jonathan Swift, Lao Tzu, iyo Magacyada daahan ee xafiiska wareegtooyinka, kuwaasoo ay ka yimaadeen fikradaha in- tooda badan, dhaliyayna buuggan, oo ku salaysan sheeko aan dhab ahayn; Iyo dhiirigelintii qoyskayga iyo horumarinta shaqsiyadayda iyo qiimaynta falsafa- dayda – khaasatan hooyadeey taageerada aan kala go’ lahayn ee ay ii gaysatay. Ugu dambayntii xaaskayga Li, aad baan ugu mahadnaqayaa sidii dulqaadka la¬hayd, faallo ka bixinteedii, iyo taageeradeedii farsomada la xiriir tahay oo ay ii fidisay wakhtigii iigu dhibka badnaa.
Ken Schoolland. Qoraaga buugga. Halgankii Yoonis Maskiin: Taxanihii Suuqa Madax Bannaan.
2. Dhib Abuurayaal
Waa maxay sababta loo shaqeeyo? Ma wanaagsan tahay mise waa ay xun tahay in qalabka wax soo saarka sahla oo kor u qaada wax soo saarka shaqada, ay shaqaalahu ku lumiyaan shaqooyinkooda? Maxaa u sabab ah? Yaa ay saamaysaa? Sidee bay dadku uga hor yimaadaan arrimaha noocan oo kale? Sidee baa loo joojin karaa wax cusub soo saaridda oo ay keento in ay shaqaaluhu ay ku lumin karaan shaqooyinkooda? Waa maxay tusaalaha noocan oo kale misna ay shaqaaluhu ku lumin karaan shaqooyinkooda? Maxaa kaa reebaya in aad isticmaashid xoog?
3. Shamacyo iyo Koodhadh
Ma wanaagsan tahay mise waa ay xun tahay in dadku ay ka helaan nal iyo dab bilaash ah qorraxda? Yaa ka soo horjeeda? Miyeey la mid tahay tan laga soo horjeedo midda lagu doonayo in dibadda lagaga keeno iyadoo iib lagu doonayo? Maxay dadku uga soo horjeedaan in dibadda laga keeno? Sidee bay dadku ku joojin karaan alaabta dibadda laga keeno ee lagu keeno wadanka lacag aad u jaban? Tusaale ka bixi? Maxaa kaa reebaya in aad shaqaalahaaga oo dhan aad ku bedeshid qalabka cusub oo kor u qaadaya wax soo saarkaaga?
4. Askarta Cuntada
Maxaa beeraleeyda qaar lacag loogu siiyaa in aysan waxba beerin? Maxaa ku dhaca qiimaha raashinka iyo helistiisa dadku ay ku helaan raashinka? Baahi intee le’eg ayaa abuurmi karta? Tusaale dhab ah ka bixi arrintan oo kale? Maxaa kaa reebaya in aad isticmaashid xoog?
5. Sheeko Kalluun Oon Caadi Ahayn
Sidee bay dadku ula dhaqmaan waxa dadka ka wada dhexeeya? Yaa iska leh harada iyo kalluunka? Sidee bay xaaladda kalluumaystuhu isu bedeli lahayd haddii uu iska leeyahay harada? Yaa ka faa’iidaysta waxa la wada leeyahay? Tusaale ka bixi? Maxaa kaa reebaya in aad isticmaashid keligaa waxa la wada leeyahay?
6. Marka Aqalku Uusan Ahayn Hooy
Waa maxay dhibaatada ay leedahay lahaanshaha ka heer sarreeya tan dadka intiisa kale ama uu qof leeyahay? Haddii madaxdu ay isticmaali karto, xukumi karto, qaadan karto, ama ay burburin karaan aqal uu qof kale uu dhistay,
haddana kumaa run ahaantii iska leh aqalkaas? Hantidu la canshuurayo ma waxay la mid tahay aqal la kiraysanayo? Tusaale ka bixi?
7. Labadii Carwo Ee Xayawaanka
Ma habboon tahay in dadka lagu khasmo in ay bixin lacag si ay u booqdaan carwada? Sabab noocee ah ayuu qofku u bixin karin lacagtaas? Maxaa ku dhici kara dadka diida in ay bixiyaan canshuurta lacagtaas? Sidee bay wax yeeli karaan? Tusaale ka bixi?
8. Shaqaysanayaa Lacag
Ma wanaagsan tahay mise waa ay xun tahay in la daabacdo lacag? Kuma ayaa go’aamiya in lacag la daabaco? Sidee bay dadka u saamaysaa? Marka la is barbar dhigo lacagta been abuurka ah ee dadka qaarkii ay samaystaan iyo tan dawladu daabacdo ee saxda ah maxaa u dhexeeya labadan, maxaase lagu kala garan karaan? Yaa ka mas’uul ah kororka maciishada? Tusaale ka bixi?
9. Mashiinkii Riyada
Yeey riyadiisu noqotaa dhab? Maxaase u sabab ah? Dawladaha soo koroya haddii ay kor u qaadaan mushahaarada shaqaalahooda yaa kale oo ay arrin tani caawini kartaa? Maxaa bedeli kara tartanka furan? Maxaa loola jeedaa “ma jiraan wax bilaash ah, xitaa haddii ay ahaan lahayd qado bilaash ah”?
10. Iibinta Awoodda
Laaluush qaadashadu ma sharci baa mise waa sharci darro? Siyaasiyiintu laalu- ushka miyeey qaadan karaan mise waa la siin karaa? Waa maxay dhibaatada ay leedahay laaluush qaadashadu? Sidee baa Golaha daynteeda u saamaysaa jiilasha soo koraya “nacnac laga qaatay ilmo yar”? Tusaale ka bixi?
11. Hadhacaan Rayiislayaasha Kulmista ah
Maxaa loola jeedaa “dambiyada sii kordhaya”? Maxaa ku dhici kara qofka diida in la xiro? Sidee bay u saamaysaa sharciyada xirfadleeyda loogu oggolaado shaqaalaha in ay ku helaan warqada shaqada? Sharcigu ma reebayaa mise waa taageeraa in hal shirkad ay suuqa keligeed iska maamulato? Ma sharcigaa diidan mise waa oggol yahay arrintan oo kale? Maxaa u sabab ah? Tusaale ka bixi?
12. Dagaaladii Maktabadaha
Sidee bay ku noqon kartaa xulashada buugaagtu dacaayad ama faafreeb? Ma habboon tahay in dadka lagu khasbo in ay bixiyaan lacagta buugaagta aysan jeclayn? Maktabaduhu ma jiri karaan taageero dawladeed la’aantood? Maxay ku kala duwan yihiin wax qabadka ay dawladu iyo kuwo maktabaha dadku leeyihiin u gaystaan maktabadaha?
13. Waxba Ma’ahan
Dhibaato intee le’eg ayaa ka imman karta marka farshaxanka ay dawladu dhaqaale u gaysato iyadoo isticmaalaysa canshuurta dadka? Xulashada far- shaxanka ma arrimo khusaysa dadka bulshada ugu aqoonta badan miyaa? Madaxdu ma noqon karaan kuwo ulajeeddo wanaagsan leh marka ay dhaqaale siinayaan kooxaha farshaxanka ku shaqaysta? Farshaxanka, fanka, iyo suu- gaan dhaqameedku ma jiri karaan haddii aysan dawladdu taageero u gaysan; taageero aysan ka helayn lacagta canshuurta shicibku ay bixiyaan? Sidee bay u saamaysaa shicibka marka taageero loo gaysto? Tusaale ka bixi? Arrimo noocma ah ayaa halkan ka jiri kara?
14. Danta Gaarka ah
Ciyaaryahanada oo dhami ma guulaystaan? Maxay u wada faraxsan yihiin dadka wax iibiya? Dadku ma ku khasban yihiin in ay taageeraan xafladaha noocan oo kale? Sidee baa arrimaha siyaasadda la xiriira loola barbardhigi karaa tan ciyaarta? Tusaale ka bixi?
15. Adeer Samta
Adeer Samta dib ma u soo celiyaa inta uu qaato in le’eg? Maxay dadku u caban waayaan marka uu ka qaadanayo aqalladooda? Maxay madaxdu u maamulaan dabaaldega sannadeedka diiniga ah? Sidee bay dabaaldega sannadeedka diiniga ahi u saamaysaa shicibka? Tusaale ka bixi?
16. Diin iyo Bakayle Dib loo booqday
Maxay ku kala duwan yihiin ka ganacsiga warqada dawladdu ay maamusho iyo tan ganacsatadu ay gaarka u maamulaan? Yaa si gaarka uga faa’iida marka shirkad keligeed ay gacanta ku dhigto ka ganacsiga warqadaha dadku isu di- raan? Xakamaynta warqado isu dirka shicibka dhexdiisa miyeey suurta gelisaa in la xakameeyo mawaadiniinta? Tusaale ka bixi?
17. Guddiga Dheefshiidka
Macmiileeydu ma ku faraxsan yihiin makhaayadaha siyaasadda? Yaa go’aamiya raashinka lagu kariyo? Dadka maamula iyo kuwa ka shaqeeya si fiican ma loola dhaqmaa? Maxaa dhici lahaa haddii raashinka maskaxdu u baahan tahay ee laga helo jasiiraddan loola dhaqmo sida raashinka calooshu u baahan tahay? Tusaale ka bixi?
18. “Waxaad Isiisaa Waxaad Soo Dhaaftay Ama Mustaqbalkaaga!”
Waa sidee noloshu, xorriyada iyo hantidu marka loo eego wakhtiga? Muxuu tuuggu uu ula mid yahay ama uu kaga duwan yahay canshuur soo uruuriyaha?
Waa maxay sababtu? Fisqi ama akhlaaqdarrada fudud iyo tan xooggan maxay ku kala duwan yihiin? Tusaale ka bixi?
19. Dawladaha iyo Suuqa Ganacsiga
Muxuu ninka lo’leeyda ihi saciisa u iibiyaa si uu u soo iibsado dibi? Maxay iskaga mid yihiin dawlada iyo ninka lo’leeyda ihi? Ma jiraan tusaale la mid ah tan oo kale? Maxaa ka imman kara isticmaalidda xoog si loo fuliyo dan? Tusaale ka bixi?
20. Xirfadda adduunka Ugu Da’da wayn
Ma jiraan wax ka dhexeeya kuwo yiraahda mustaqbalkaanu wax ka sheegnaa iyo qaar ka mid ah aqoonyahannada cilmiga dhaqaalaha? Boqolkii intee ka mid ah ayaa mustaqbalka si fiican u saadaalisa? Sidee baad ku ogaan kartaa? Aqoonyahannadu aqoontooda ma u isticmaalaan arrimo aan qiimo saas ah u lahayn bulshada?
21. Soosaaridda Kabaha Dusha Ka Xiran—Buudhka
Maxaa dadka lacag loo sii yaa? Ma si aysan waxba u soo saarin? Maqaadan lahayn shaqo aad lacag ku qaadanaysid oo aadan waxba qabanaynin? Dadkase mushahar ma siin lahayd iyagoon shaqaysan? Maqaadan lahayn lacag bilaash ah/caydh aadan waxba laguu direen? Ma jiraan tusaalooyin aad og tahay? Tusaale ka bixi?
22. Sacab Garaacayaasha
Ma aqli galbaa in lagu qiimeeyo anshaxa suubban awoodda, hantida, iyo xaq qofku uu leeyahay sacab kor loo garaacay oo la eegayo inta uu qayladiisu le’eg tahay? Ma aqli galbaa in tan lagu xulo coddeeynta tirada dadka coddeeysay? Sidee baa ugu habboon oo lagu qiimayn karaa/xuli karaa? Tusaale ka bixi?
23. Iyadoo Loo Eegayo Baahida
Wax ma iska bedelayaan dhibcaha ardaydu ay helaan haddii ardayda dhibca- hooda hooseeyo laga dhigo kuwo aad u sarraysa iyo kuwo sarraysana laga dhigi kuwo aad u hooseeysa? Qawaaniinta hab dhaqaale sidan oo kale ma noqon karaan? Dugsigu ma ka gedisan yahay nolosha dugsiga ka baxsan ee dhabta ah? Macalimiintu ma aqbalayaan in ardayda mushahar la siiyo, si ay wax u bartaan? Tusaale ka bixi?
24. Mushahaaradii Dambiilayaasha
Sabab noocma ah ayaa loo xiray dadka shaqaysanayay? Maxay tani dadka ku caawisaa ama wax u yeeshaa? Markee baysan ahayn in aan la shaqayn? Dadka iskaa wax u qabso ku shaqeeya ma jabiyaan sharciga u degsan mushaharada qofku uu saacaddii qaadan karo? Dadka halkee baa u wanaagsan ma dugsiyada ama xabsiyada mise shaqada? Tusaale ka bixi?
25. Khiyaamo ama Macaamalid
Maxaa loogu ridaa rootiga dambiisha wayn? Muxuu rootiga lagu riday dambi- ishu uu u sii dhammaanayaa? Xal noocee ah ayaa lagaga hortagi karaa in uusan dhammaan rootiga dambiisha lagu wada riday? Xalkee baase ugu wanaagsan? Tani sidee bay u khusaysaa qof aadane ah? Tusaale wax laga baran karaa ma jiraa? Tusaale ka bixi?
26. Kuma Ayeey Ka Timid Fikraddan Aadka U Wacan?
Qof ma iska lahaan karaa isticmaalid fikir uu qofkaasi alifay? Sharciga lahaan- sha waxa qofku alifay ma suurta gelisaa in uu qofkaasi helo wuxuu soo saaray? Maxaa dabada ka wada kuwa wax alifa? Sharciga lahaansha waxa qofku uu alifay dhibaato miyeey hor dhigtaa wax cusub soo saaridda ama xorriyada? Sharciga lahaanshaha waxa qofku uu alifay la’aantiis sidee bay isu bedeli karaa dabeecadoodu?
27. Cakis ah
Dadku ma kuwo wax la yeelay baa? Yaa wax yeelay? Maxaase lagu sameeyay? Sharcigu ma mid is burinayaa marka arrintan loo eego? Sababtu waa maxay? Waa maxay farqiga u dhexeeya waxa aan la oggolayn qofku in uu sameeyo iyo kan sharciga kaba baxsan? Tusaale ka bixi?
Ma suurta gal baa in la sameeyo arrimo caafimaadka wax u dhimaya ama leh khatar dheeraad ah? Ma habboon tahay in dadku ay bixiyaan lacag khal- adaadka ay ka galaan dadka kale? Markee bay dadku wax bartaan, ama aysan waxba ka baran khaladaadkooda? Madaxdu ma yihiin kuwo ka aqli badan dadka ay xukumaan? Tusaale ka bixi?
29. Baadigoobkii Weynaa
Waa maxay mas’uuliyaddu? Dadku ma doonayaan mas’uuliyad? Dadku ma doonayaan madax u gaarta go’aamadooda? Kala xulashadu/dookhu muhiim ma yahay in uu ahaado mid samaan? Wanaagu ma yahay muhiim? Maxaa u sabab ah? Tusaale ka bixi?
30. Sharciyada Feeryahannada Guuldaraysta
Haddii dadka aan dambi lahayn looga baahdo in ay wixii dhib ah ee ku dhaca ay lacag ka bixiyaan, tani sidee bay dabeecadooda wax uga bedeli kartaa? Maxaa dadka ku dhiiri gelin kara in ay dhibkaas oo dhan u maraan in ay la tartamaan dadka kale? Ma tahay mid muhiim ah? Goorma ayaa la oggol
yahay khamaarka, markeese ayaan la oggolayn khamaarka in aan la ciyaarin? Sababtuna maxay tahay? Tusaale ka bixi?
Maxay dadku ugu codeeyaan musharaxii horay ugu guulaystay? Siyaasiintu ma yihiin kuwo la aamini karo? Xaq ma u leeyahay qofi in uu cawdo maadaama uusanba codeeynba? Xiriir ma ka dhexeeyaa haweeneey ninkeedu ku xadgudbo iyo cod bixiye siyaasigiisu ku xadgudbo? Arrimo noocee ah ayaa halkan ka jiri kara? Tusaale ka bixi?
32. Canshuuriddii Dhererka
Ma habboon tahay in canshuur loo isticmaalo sida wax looga bedeli lahaa dabeecadda dadka? Dadku noloshooda wax ma ku kordhisaa haddii canshuurta laga dhimo? Madaxdu ma ka aqli badan yihiin, mana ka anshax wanaagsan yihiin dadka u codeeya? Ma waxay tahay wax aan xaq ahayn in la canshuuro dadka dhaadheer? Tusaale ka bixi?
33. Soo Galootiga Cusub
Mas’uul miyeey ka yihiin waardiyayaasha ilaaliya xuduudda in la celiyo soo galootiga cusub? Maxay ku kala gedisan yihiin soo galootiga cusub iyo soo galootiga cusub ee hor leh? Sababtu maxay tahay? Ma habboon tahay in dhallinyarada da’da yar laga dhigo askar? Tusaale ka bixi?
34. Dacwo Maxkamadeed
Waa maxay mas’uuliyadda ku saaran? Ma wax wanaagsan baa in la xakameeyo mas’uuliyadda qofka saaran? Sidee bay dabeecaddu isu bedeshaa haddii aan wax laga bedelin mas’uuliyadda qofka saaran? Waa maxay danta guud, yaase go’aamiya? Shacabka danta guud ma u xumaan kartaa? Tusaale ka bixi?
Yaa iska leh naftaada? Muhiim ma tahay cidda go’aankeeda iska leh, mise dhakhtarbaa go’aankeeda leh? Waa maxay farqiga u dhexeeya shahaado iyo warqad ku shaqaysi? Suuqa madax bannaan ee uu tartanku ka jiro qiimo ma u leeyahay xirfad cilmiga caafimaadka? Tusaale ka bixi?
36. Aqallada Hortooda
Sidee bay dad kala gedisan u saamaysaa sharciyada aqallada kirada lagu xakameeyo, sharciga lagu dhisi karo aqallo cusub iyo meesha laga dhisi karayo? Sidee buu suuqu wax u yeelaa ama uga faa’iideeyaa ganacsiga wanaagsan iyo kan xun? Sideese wax uga bedelaan sharciga lagu xakamaynayo kirada aqallada? Tusaale ka bixi? Arrimahani sidee bay dhaqaalaha wax ugu gaystaan?
37. Qawleysatada Dimoqraadiyadda
Ma wanaagsan tahay in qofi qof kale wixiisa uu xoog kaga qaato? Ma habboon tahay in dadka badani ee awoodda lehi ay dadka tirada yar ay waxooda xoog kaga qaataan? Waa maxay waxa dadka badani loo oggol yahay in ay sameeyaan oo aan loo oggoleen qof keligiis? Maxaa sababa in ay siyaasadu isu bedesho mudaharaad? Tusaale ka bixi? Arrimo noocma ah ayaa jiri kara?
38. Shimbir cunis badan, Dawarsadayaal, Ragga wax khiyaameeya, iyo Boqorrada
Summad ceenkee ah bay dadka kuwani u yeelaan karaan: Shimbir cunis badan, dawarsadayaal, ragga wax khiyaameeya, ama boqorrada? Shaqo noocma ah ay- eey qabtaan? Ma habboon tahay in dadka iyo dawladda isku si loola dhaqmo?
39. Iftiinka Xorriyada
Ma suurta gal baa misa waa habboon tahay in bulshadu ay ahaato mid ka xor ah dagaal, xoog iyo khiyaamo? Ma suuroobi kartaa in la gaaro sinnaan ka dhexaysa dadkoo dhan? Waa maxay habka bulsho xor ihi ay horumarka ku gaaraan? Wax alle iyo waxaad doonto ma waxaad ku raadinaysaa xoog? Tusaale ka bixi? Arrimo noocma ah ayaa halkan ka jiri kara?
Falsafadda buuggani ku salaysan tahay waa mabaadiida hanti yee- lashada. Adiga ayaa ka mas’uul ah naftaada. In mas’uuliyaddaada shaqsiyadeed laguu diido waxay ka dhigan tahay iyadoo la yiraahdo qof kale ayaa awood gaar ahaaneed ku leh naftaada oo kaba sarreeya taada shaqsiyanka ah. Cidkalena ama koox lehi naftaada ma jirto, sidoo kalena ma lehid nolosha dadka kale.
Waxa aad jirtaa waa wakhti: mid soo socda, taagan, iyo la soo dhaafay. Tanni waxay tusaale u tahay nolosha, xorriyada, iyo wax soo saarka noloshaada iyo xornimadaada. In aad lumisid noloshaada waxay la mid tahay adigoo lumiya mustaqbalkaaga. In aad lumisid xorriyadaada waxay la mid tahay adigoo lumiya jiritaankaaga. Sidoo kale, in aad lumisid wax soo saarkaaga noloshaada iyo xorriyadaada waxay la mid tahay adigoo lumiya wixii aad horay u shaqaysatay.
Wax soo saarka noloshaada iyo xorriyadaada waa hantidaada. Hantidaadu waa miraha shaqadaada, wax soo saarkaaga aad gelisay wakhtigaaga, xoog- gaaga, iyo aqoontaada. Waa taas tan aad si fiican aad u isticmaashay. Waana hantida dadka kale oo lagugu siiyay iskaashi iyo istixgelin. Labo qof oo han- tidooda isku dhaafsada si iskaashinimo iyo tixgelinimo ay ku dheehan tahay. Labadoodubana faa’iideey ka helaan haddii kale ma ay sameeyeen wax isdhaaf- sigoodaas. Iyaga uun baana go’aankaas gaari kara, oo geli kara wixii heshiis ah ee labadooda dhexmari kara.
Mararka qaarkood dadka qaar baa isticmaala xoog ama khiyaamo ay ku qaataan hantida dadka kale iyagoo aan raalli ka ahayn oo aynaan ku heshi- inin. Abaabulka xoog nafta lagu qaado waa dil, in lagaa qaado xorriyadaada waa adigoo lagu adoonsado, iyo sidoo kalena in lagaa qaato hantidaadana waa adigoo lagu xaday. Waana isku mid haddii uu sameeyo qof keligiis, iyo haddii ay sameeyaan koox ka soo horjeeda dad tiro yar amaba xitaa haddii madaxda wax xukunta ay sameeyaan.
Waxaad xaq u leedahay in aad badbaadisid naftaada, xorriyadaada, iyo in aad ka difaacdid hantidaada kuwa doonaya in ay xoog kaaga qaataan. Waadna waydiisan kartaa dadka kale in ay macaawino kuu fidiyaan si aad isku difaac- did. Laakiin xaq uma lihid in aad adigu xoog isticmaalid aad biloowdid oo waxyeeshid nolosha, xorriyada, ama hantida dadk kale. Sidoo kalena, xaq uma lihid in aad cid kale aad wakiilatid si ay dagaal ugu qaadaan dad kale.
Waxaad xaq u leedahay in aad dooratid madaxdaada ku hoggaamin lahayd, laakiin xaq uma lihid in aad dadka kale ku khasabtid dadkii xukumi lahaa. Si kasta oo madaxda lagu xusho ha ahaatee, waa uun aadane aan xaq u lahayn ama aan ku andacoon karin ka sarrayn ay kaga sareeyaan dadka intiisa kale. Si kasta oo isku dayaan in ay isticmaalaan magacyo ama tiro dad oo ku taageersan. Sinnama madaxdu uma dili karaan cidna, ma adoonsan karaan qofna, ama waxba ma xadi karaan. Mana siin kartid xuquuq aadan adigu aadan haysanin.
Maadaama aad ka mas’uul tahay naftaada, adiga ayaa mas’uuliyaddeedu
ku saaran tahay. Kama aadan kirayn naftaada dadka kale, kuwaasoo kaa dal- bada mudeecnimo. Sinnama uguma tihid adoon dadka kale ee kaa dalbada in aad naftaada u hurtid. Adiga ayaa go’aansada qorshoyaashaada kuwaasoo ku salaysan fikirkaaga. Guusha iyo guuldarradu waa wax loo baahan yahay oo wax laga barto, lagana helo waayoaragnimo. Ficilkaaga aad ku samaysid adigoo ka wakiil ah dad kale, ama ficilkooda ay adiga awgaa ku samaynayaan, waxa keliya ay sax noqon karaan marka ay timaaddo iskaashi iyo istixgelin. Samaan ama dhaqan suubban waxa keliya oo uu jiri karaa marka qof uu xor yahay go’aankiisana uu isagu uu gaari karo.
Tanina waa buddhiga bulsho xor ah. Mana aha tan keliya ay suurta gal ka dhigi karta aasaaska ficilka insaaninimo, waase ta keliya ee habboon.
Dhibaatooyinka adduunka ka jira ee ku bilaabma xoog dawladeed, waxay leeyihiin xal. Xalkuna waa in dadka adduunka ku nooli ay waydiistaan dawlada- hooda in ay joojiyaan xoogga ay isticmaalayaan. Xumaato kama bilaabato uun dadka xun, laakiin sidoo kale waxay ka bilaabmataa dadka wanaagsan oo u dulqaata in la isticmaalo xoog oo loo isticmaalo in lagu gaaro dan. Sidaa daraadeed, dad wanaagsan ayaa awood balaadhan siiyay dad xun intii ay taari- ikhda adduunkani uu jiray.
Kalsoonida loo hayo bulsho xor ihi waa xoog saarid la saarayo habka wax loo soo saaro ee lagu keeno suuqa madax bannaan taasoo u baahan in culays la saaro qiimaynta suuqa loo hayo, oo aan la fiirinayn wax lagu soo xakameeyay suuqa. In la isticmaalo xoog dawladeed oo la dulsaaro suuqa waa aragti wadata caajisnimo, waxayna keentaa wax aan loogu talagalin, iyo khilaaf. In la helo bulsho xor ah waxay u baahan tahay in si geesinimo leh loo fikiro, loo hadlo, waxna loo sameeyo – khaasatan marka ay fududahay in aan waxba la samayn.
Yoonis waxa uu baadigoobayaa dhulka xorriyada dhabta ah ka jirto.
Maadaama uu Yoonis si adag u qabsaday dhabarkii shimbirtii. Shim¬birtii weynayd waxay ku soo wareegtay jasiiraddii dusheeda. Kadib markii Yoonis si fiican ugu fadhiistay dhabarkeeda, shimbirtii si sibi- ibaxasho la moodo ayeey toos dhankaas sare ee qorraxda ku toosan isku sii daysay. Waxaa hoos u soo riixay dabayl culus oo duulimaadkoodii yara hakiyay. Waxay sii socdaanba wakhigiina waa uu sii dheeraanayaa, wuxuu noqonayaa saacado. Socdaalkoodii waxa uu durbadiiba ka dhigay Yoonis in uu si sahlan ku seexdo.
Yoonis waa uu riyooday. Riyadiisa, waxa uu ku ordayay waddo aan sidaas u weynayn, waxaana caydhsanayay dad hadh wayni uu qariyay. “Istaag, kaagan taageersan dawladda!” ayeey ku qayliyeen. Laakiin waa ay cabsadeen, si dhaqso leh ayuu u sii cararay. Mid xooggan ayaa hortaagnaa dadka intiise kale – Marwo Ashkira. Waxa uu dareemay neefteeda oo uu ka dareemay qoortiisa, waxayna doonaysay in ay ku soo qabsato faraheeda xooga badan.
Yoonis waa uu kacay oo waxaa kiciyay shay si culus loo garaacayo. “Maxay! Halkee baad joogtaa? Ayuu waydiiyay Yoonis, isagoo kor u sii daynaya qaar ka mid ah shimbirtii baalasheeda.
“Halkan ayaan kaaga tagayaa, geeri go’anka xeebtan agteeda,” ayeey shim¬birtii ku tidhi Yoonis. “Sii soco xoogaa yar, una sii soco dhinacaas waqooyi, waxaad heli doontaa reerkiiniiye.” Waxay yimaadeen xeeb la moodo in uu yara garanayo Yoonis. Naq cusbo dhumucyo waaweyn ayaa ka lulmanaya, kuwaasoo taxnaa xeebta qarkeeda kore oo dhan, ciideeduna waa cammuud qurux badan oo midabka dahabka oo kale ah, iyo badda oo u eg midabka cirrada oo kale taa- soo haddana qaboow, si fiicana aad u daraymaysid marka biyaha badda ay soo gaadhaan berriga. Yoonis si farxad ay ku jirto ayuu uga soo dagay dhabarkii shimbirtii.
Islamarkiiba Yoonis Maskiin waxa uu ogaaday halka uu joogo. “Waxaan joogaa aqalkaygii!” ayuu yidhi isagoo faraxsan. Waxa uu bilaabay in uu ordo oo uu ku ordo ciidii cammuudda ahayd. Waa uu yara hakaday markaasuu soo jeestay oo ku soo jeestay shimbirtii. “Laakiin waxaad igu tidhi waxaad i gaynaysaa meel waxa la sameeyo loo sameeyo, maxaa yeelay, waa sax,” ayuu yidhi Yoonis.
“Waad timid,” ayeey tidhi shimbirtii.
“Laakiin ma’ahan sida ay halkan wax yihiin,” ayuu ku cawday Yoonis.
“Wali ma’ahan, dabcan laakiin waa noqonaysaa marka aad adigu ka dhigtid. Si kastaba ahaatee, xitaa Booliqaran, waxay noqon kartaa janno marka dadku run ahaantii ay yihiin xor.
“Booliqaran?” Yoonis waa uu neeftuuray. “Dadka intooda badan ee ku nool Jasiiraddaas, inta aan wali silsiladaha aan lagu xirin, waxay aaminsan yihiin in ay yihiin xor. Marwo Ashkira ayaa u sheegtay in ay yihiin dad xor ah. Intooda kalena waa ayba ka baqaan xorriyada, cabsida ay ka qabaana waxay si fudud
awood u siiyaan Baadigoobaha Weyn.”
“Aamin ficilka, ha aaminin erayada,” ayuu xusuusiyay shimbirtii. “Dadku waxay moodaan in ay yihiin xor mar haddii loo sheego waxa ay samaynayaan. Tijaabada dhabta ah ee xorriyadu waxay timaadaa marka qof uu go’aansado in uu sameeyo wax ka duwan waxa ay sameeyaan dadka intiisa kale. Taasina waa wakhtiga la barto casharro hor leh, dadkuna ay helaan fursad qaali ah.” Yoonis markiiba waxa uu dareemay walwal badan. Walwalkii ayaa ku ko- rdhay markaasuu caws xoogaa ah dhulkii ka soo gooyay oo uu bilaabay in uu ciidii cammuudda ahayd uu ku mudmudo cawskii. “Sidee bay wax yihiin? Waan arkaa dhibaatada – laakiin waa maxay xalku?”
Shimbirtii intii uu Yoonis waydiinayay su’aalaha waa ay warwareegtay oo ku heehaabtay Yoonis agtiisa oo qallajisatay baalasheedii. Markii wax walba ay si fiican ugu qallaleen Shimbirtii waxay eegtay baddii iyadoo leh, “Wiilkaaga yaroow, ma waxaad baadigoobaysaa mustaqbal wanaagsan oo ku qotoma fikir aad u fog iyo aragti qoto dheer?”
“Dabcan waa filayaa,” ayuu yidhi Yoonis.
“Taasi waa dhib badan tahay. Kuwa wax xukuma mar walba waa kuwo leh fikir aad u dheer, fikirkaasna waa ay ku khasbaan dadka intiisa kale.”
“Laakiin miyaan u baahnayn in aan ogaado halka aan u socdo?”
“Naftaada dabcan haa, laakiinse ma in aad fikirkaaga ku khasabtid dadka kale.” Shimbirtii waxay u soo jeesatay Yoonis mar kale, cideedii ayaa kordhay iyadoo si culus u xajisanaysa dhulka misna ciidii cammuudda ahayd meel ka xaaqxaaqanaysa. “Dhulka xorta ah waxaa qiimo wayn siiya kalsoonida samaan, dhaqanka wanaagsan, nidaamka hawsha loo fuliyo iyo wax soo saarka guud. Kumanaal qof oo mid waliba uu doonayo in uu wax cusub soo saaro ama qabsado, mid walbana uu ku hamiyo sidii uu ku gaari lahaa qorshihiisaas, dadka noocaas ahi oo kale waxay suurtagal ka dhigayaan adduun wax waliba ay ka suurta geli karaan oo aadan qiyaasi karayn baaxadiisa inta uu le’eg yahay. Marka hore eeg waxaad kartid, kadibna waxaa ku xiga darajo sare.”
Waxa uu dareemay in dhinbil dab ah jirkiisa dhexdiisa ka gubanayo, Yoonis waxa uu isku dayay in uu fahmo. “Haddii dadku ay yihiin xor, waxay helaan xalal filanwaa ah? Haddii dadku aysan xor ahayna, waxay helaan xalal aan la filayn! Saasi soo ma’ahan?”
“Ma mid u baahan xikmad baa in la ogaado madaxda wax xukuma waxa aan looga baahnayn in ay sameeyaan?” ayeey raacisay Shimbirtii. “Qaad imtix- aan si aad u ogaatid guddoominta: Haddii aadan haysan xuquuq aad wax ku samaysid, dabcan wax xaq ah oo aad u leedahay ma jirto in aad waydiisatid in ay siyaasiintu ay kuu sameeyaan.”
Yoonis isagoo shakisan ayuu waydiiyay, “Waxaan u malaynayaa in aan fah- may, laakiin uma aan malaynayo in ay cidi i dhagaysanayso.”
“Waa mid adiga kuu fiican haddii cidi ku dhagaysato ama aysan ku dha- gaysan. Kuwa kula qaba qiimaha xorriyadu ay leedahay ayaa muujin doona geesinimo.” Shimbirtii waxay u jeesatay dhinicii badda ay kaga beegnayd markaaseey macsalaamaysay Yoonis. Yoonis waa uu daawaday shimbirtii weynayd intii ay is u ruurinaysay, iskuna gaynaysay jirkeeda oo dhan si ay u duusho oo ay jirkeeda ka horgeeso dabaysha xooggeeda. Muddo yar ka dib waxay ku qar- soontay daruurihii cirka. Yoonis waxa uu u jeestay waqooyi isagoo bilaabaya in uu ku socdo xeebta dhinaceeda.
Waxba kama uu xusuusto socodkiisaa marka laga reebo ciida cammuudda ah ee cirbihiisa ka galay iyo tan jirkiisa buuxisay. Yoonis waxa uu xusuustay
dhagax culus oo yaalay waddada laga galo aqalkooda. Markiiba waxa uu u soo dhawaanayay aqal iyo dukaan ku yaala meel nabdoon – aqalkiisa.
“Xorriyad. Haaheey. Intee in le’eg ayeey dadku u soo halgameen xorriyadda ama ay ka soo horjeesteen, inta badanna isku mar. Dadku, waa hagaag, dadku waa in ay ahaadaan xor si ay u sameeyaan wax alle iyo wixii ay doonaan dariskoodana ay u oggol yihiin intaas in la mid ah,” ayuu yidhi Yoonis isagoo si xeel dheeri ay ku jirto u eegaya safarkiisii. “Uma aan guuxin deriskayga wax- aana laga yaabaa in aysan oggolaan in aan wax isku darsano, laakiin ma’ahan in aan isticmaalo xoog sharciyaysan marka laga reebo isdifaacayga uun. Waxay iila muuqataa in ay taasi tahay mid la fulin karo – bani-aadninimo leh – haa, iyo daacadnimo. Ma aan ihi ruux dhamaystiran oo wax walba loo dhameeyay, laakiin waa istixgellin – iyo taasoo ka wanaagsan waxa kale ee suurta gal noqon kara.”
Waa uu sii socday isagoo amakaagsan isna waydiinaya maxay dadka ugu adag tahay in ay dadka kale u daayaan arrimahooda in ay iyagu wataan. “Kala doorashadu dadka waxay siisaa waayoaragnimo iyo horumar halgankoodana oo ugu dambayntana keena barwaaqo. Awoodda siyaasadeed waa in ay ilaalisaa xorriyada, ma’aha in ay dadka ka qaado xorriyadooda. Samaan waxay jiri kartaa oo keliya marka ay jirto xorriyad wax lagu kala doorto,” ayuu ku soo gunaanaday Yoonis.
Yoonis aabihiis waa nin dheer oo jirkiisuna uu dhisan yahay, wuxuuna hor fadhiyay daarada horteeda, isagoo laablaabanayay xadhig. Indhihiisii ayaa weynaaday layaab awgood markii uu arkay wiilkiisii oo ku soo socda, una soo socda dhinaciisa. “Yoonis,” ayuu la qayliyay “Yoonis-wiilkaygiiyoow, halkee baad jirtay?” waxa uu u yeedhay xaaskiisa taasoo markaas ku mashquulsanayd nadiifin ay aqalka gudihiisa ka haysay, “Eeg, Cawo, eeg yaa yimid!”
“Waa maxay qayladaada?” ayeey tidhi Yoonis Hooyadiis, iyadoo si taxadar ku jiro u eegaysa. Waxay u soo baxday banaanka, markaaseey soo gaartay aqalka daaradiisa dabadeedna waxay biloowday in ay farxad la qayliso markii ay indhaheeda ku dhufatay wiilkeeda, Yoonis Maskiin. Islamarkiiba waxay kala daashay dhunkasho iyo iyadoo gacantiisana qabsanaysa haddana habsiinaysa. Kadib dib ayeey u riixday wiilkeeda iyadoo wali gacantiisa haysata markaaseey biloowday in ay iska ooyso. “Wiilkaygoo halkee baad ku maqnayd? Ma gaa- jaysan tahay, Yoonis Maskiin?” markiiba waxay ku tidhi odaygeedii iyadoo faraxsan, “Huri dabka, Qafaar, digsigana saar!”
Waxay la qaybsatay kulan faraxeedkoodii. Markii uu cunay rootigii ugu dambeeyay ee ay hooyadii u samaysay, Yoonis waa uu neeftuuray kadibna dib ayuu ugu sii fadhiistay kursigii uu markii horeba ku fadhiyay. Yoonis waxa uu u sheegay safarkiisii uu ku tagay Jasiiradda Booliqaran, si taxadar ku dheehan tahay ayuu uga sheekeeyay kulamadiisii uu kula kulmay habar dad iyo habar dugaag. Dukaankan duqa ah iyo kuwo safkiisa ku dhagan mar qudha ayaa nalal qurux badan ka ifeen. Hadhkiisii ayaa qariyay gidaarkii ka soo horjeeday dabka reerku aqalka gudihiisa ay ka shiteen. “Maxayn u ahayn wiilkaygoow, waxaad u eg tahay qof weyn,” ayuu yidhi aabihiis. Si xoog badan ayuu u eegay Yoonis markaasuu kula kaftamay, “ma waxaad qorshaysanaysaa in aad iska dhaqaaqdid mar kale, goor dhow?”
“Maya Aabe,” ayuu yidhi Yoonis, “Halkan ayaan joogayaa waxoogaa. Waxaa jira shaqooyin faro badan oo looga baahan yahay in wax laga qabto.”
Shimbir cunis badan, Dawarsadayaal, Ragga wax khiyaameeya, iyo Boqorrada
Yoonis rajo xumo ayuu kala kulmay qalbiyada foosha xun.
Waagii markii uu baryay laydhkii qorraxda ayaa kiciyay Yoonis Maskiin. Waxa uu is yidhi waxba ha kicinin Aragsan, waxa uu isku sii qaaday si uu dusha uga baxo buurtii, oo uu gaaro halka ugu sarraysa buurta.
“Dadkii!” ayaa niyadiisa ku soo dhacday haddana waxa uu ahaa mid cad- haysan. “Dadku waxay ahaayeen kuwo iswada riixriixayay. Waana kuwo isu wada hanjabayay, oo is wada xidhxidhayay, isna dhacayay, dhib faro badanna isu wada gaysanayay.” Yoonis waa uu sii socday, siina fuulay buurtii isagoo sii dhexmaraya dhul kayn ah. Waxa uu gaaray halka ugu sarraysa buurta, markaasuu si wacan u eegay magaaladii ka hoosaysay.
Yoonis waxa uu ogaaday in dhirtu ay ka sii yaraanayaa buurta dusheeda, waxa keliya oo ku yaalay xoogaa dhir yar. Wuxuuna si fiican u arkaa bisha, lana moodo in ay dushiisa saaran tahay. Hawo aad u wanaagsan ayuu dareemay. Ugu dambayntii Yoonis waxa uu soo gaaray buurta dhakadeeda. Halka uga sarraysa buurta waxay ahayd meel aan wax saas ihi aysan ka bixin, waxa uun dhulka ku daadsanaa xoogaa caleemo ah iyo waxa kale oo ku nooleyd shimbir weyn oo madoow misna fool xun oo wax cunis badan, shimbirtu waxay dul saarnayd geed laantiis. “Yaa maya,” ayuu ku reemay Yoonis, yaase moodayay in dhushu ay tahay meel soo dhawayn wacan leh. “Waa uun nasiibkayga. Waxaan ka soo tagay dooxo shimbiro wax cunis badan ay ku nool yihiin, si aan u baadigoobo dhul nabad leh, maxaanse u imid? Waa meel kale oo ay joogto shimbir wax cunis badan!”
“Shimbirtii dhabta ahayd ee wax cunista badnayd!” ayuu ku soo celiyay Yoonis.
Yoonis waa uu la yaabay shimbirtii. Si xooggan ayuu u kala furay indhihiisa. Indhihiisa waxa keliya oo ka weynaa waa dayaxa. Waxa uu bilaabay in uu dhaqaaqo, wuxuuna u socday si tartiib ah, isagoo indha-indhaynayay dhulkii oo dhan meel walba oo uu arki karayay. Wadnihiisuna si xooggan ayuu u garaacayay, bishimihiisana waxay ahaayeen kuwo gariirayay, “Yaa yidhi taas?” “Yaa yidhi taas?” ayuu maqlay. Wuxuu mooday in uu codkaasi ka yimid geed. Yoonis waxa uu eegay shimbirtii wax cunista badnayd, taasoo iskaba fadhiday. Waxa uu is yidhi, “Malaga yaabaa in ay tahay shimbir hadla – sida shimbirta baq-baqaaq yabqama? Cid kale oo halkan joogta ma jirto. Laakiin shimbirta wax cunista badan ma’ahan mid hadla.” Waxa uu niyadiisa u sheegay in sideedaba Jasiiraddan ay tahay meel aad u yaab badan oo maxaysanba u lahayn shibir hadlaya?
Yoonis waa uu kacay isagoo muujinaya dhererkiisa isna giijinaya, durbadiiba waxa uu ku dhaqaaqay geedkii. Shimbirtii maba aysan dhaqaaqin, inkastoo Yoonis uu dareensanaa in ay ku dhaygagtay.
“Miyaad ila hadashay?” ayuu waydiiyay Yoonis, isagoo og in la maqli karo codkiisa.
“Yaa kale” ayeey shimbirtii cunista badnayd ku jawaabtay. Yoonis waa uu dhici gaaray waxa uu cuskaday geedkii si uusan u dhicin. Waa uu istaagay, isna hortaagay geedkii hortiisa. “Adigu – adigu, miyaad hadli kartaa?”
“Dabcan waan hadli karaa,” ayeey tidhi shimbirtii. “Oo waad kartaa – inkastoo oo aadan garanayn waxa aad odhanayso.” Shimbirtii intay warwaree- jisay madaxeeda misna la moodo in ay dacwoonayso ayeey tidhi, “Maxaad uga jeeday markaad lahayd waxaad ka timid dooxo ay buuxsheen shimbiro wax cunis badan?”
“Aniga, Aniga, Aniga waan ka xumahay. Waxba ugama aan jeedin,” ayuu ku yidhi shimbirtii Yoonis. “Waxa weeye dadka ku nool halkaas waa kuwo aan isu naxariisan oo is xumeeya. Waxa keliya oo ay iga ahayd waa iska hadal uun. Ayaga – ayagu waxay i xasuusiyeen, waa hagaag, waxba.”
“Shimbiro wax cunis badan?” Shimbirtii waxay kala bixisay baalasheedii, oo la moodo wax qaawan. Yoonis madaxiisa ayuu ruxay. Shimbirtii intii aysan laantii ku sii fadhiisan, waxa ay isku soo laabtay baalasheedii. “Saaxiibkay- gii qaaliga ahaayoow dhibaatadaadu waxay tahay ma tihid mid si fudud loo khaldi karo oo lagu khiyaami karo hadal. Runtii ahaantii waxaad tahay qof aamina waxaad indhahaaga aad ku aragtid, mana rumaysid hadalkooda inta aad indhahaaga ku arkaysid.”
“Ma’aan fahmin,” ayuu yidhi Yoonis.
“Adiga, xagaaga dhulkani waa wada dhulkii shimbiraha wax cunista badan. Haaheee! Haddii taasi run tahay, Jasiiraddan waxay ahaan lahayd mid aad iyo aad uga fiican sida ay hadda tahay.” Ayeey tidhi shimbirtii, kuna tidhi cod isla wayni ka muuqdo. “Waxaa runta u dhow oo la odhan karaa in aad timid Jasiiraddan ay ku nool yihiin xayawaanno kala gedisan – sida shimbir wax cunis badan, kuwo dawarsadayaal ah, rag wax khiyaama iyo boqorrada. Laakiin ma ogid muhiimada ay leeyihiin, maxaa yeelay, waxaa ku khalday cinwaanka iyo hadaladooda. Waa lagu khalday, khaladkii ugu weynaa ee aad gashay waa adiga oo aad u qiimaysay fasaadkooda oo aad meel sare u qaaday sharkooda.
Yoonis waa uu is difaacay. “Ma jiraan wax khiyaamo ah. Shimbiraha cunista badan, kuwo dawarsadayaasha ah iyo waxa la mid ka ah, waa kuwo si fudud lagu fahmi karo. Halka aan ka imid, shimbirta cunista badanna waxay uruursataa lafaha dadka dhintay. Taasina waa arrin karaahiyo ah oo laga yaqyaqsado!” Yoonis sankiisa ayuu ruxruxay si uu u dhaqdhaqaajiyo. “Kuwa dawarsadayaasha ah waa kuwo sahlan oo aan dambi lahayn. Ragga wax khiyaama waa xarfaan ku xeeldheer shuquladooda oo madadaalo badan – waana kuwo ku mashquulsan wax dhicidooda.
“Kuwa Boqorrada ah iyo boqortooyada,” ayuu raaciyay Yoonis markiiba iyadoo indhihiisuna ay ka muuqdaan farxad iyo raynrayn. “Waa hagaag, waligeey lama aan kulmin midna, laakiin waxaan akhriyay in ay ku nool yi- hiin qasri aad u qurux badan iyo in ay yihiin kuwo ku xarragooda dhar aad u qurux badan. Cid walba waxay doonaysaa in ay noqdaan iyaga oo kale. Bo- qorrada iyo wasiiradooda ayaa xukuma dhulkan, waana kuwa ilaashada dadka ay xukumaan. Taasi ma’ahan wax khiyaama ah.”
“Ma’ahan wax khiyaama ah?” ayeey tidhi shimbirtii. Yoonis waxa uu si xooggan u eegay wajigii shimbirta oo la moodo in ay cadho weyni ka muuqato. “Kafaker shimbirtan wax cunista badan. Afartaas, shimbirtu waa ta keliya ee ugu laan dheeraadnimo badan. Waxa keliya ay shimbirtu samaysaa waa wixii
Shimbirtii qiimaha badnayd ee madoobayd waxay kala bixisay qoorteedii, markaaseey dhugatay Yoonis. “Marka uu dooli ku dhinto bakhaar lagu xafido alaabta iyo cuntada xoolaha oo beer ku dhextaal, waan ka nadiifiyaa dooliga goobtaas. Marka faras uu ku dhinto beer, waan ka nadiifiyaa goobtaas. Marka qof sabool ah uu ku dhexdhinto ayda, waan ka nadiifiyaa goobtaas. Waxaana helaa cunto cid walibana waa ku faraxsan tahay in aan cunto helo. Cidna waligeed ma isticmaalin qori ama sanduuq is aan u qabto shaqadayda. Ma helaa wax mahadnaq ah? Maya. Shaqada aan qabto waxaa loo arkaa mid wasakh ah oo xun. Sidaa daraadeed, shimbirta “foosha xun” waxay ku noosha- hay xumayn badan tixgelin la’aan faro badan.
“Waxaa kale oo jira kuwa dawarsadayaal ah,” shimbirtii waa ay sii wadatay. “Waxba ma soo saaraan, wax wanaagsan cidna uma qabtaan, marka laga reebo naftooda oo ay wax u helaan. Laakiin waxa dhibaato ah cidna uma gaystaan. Waa ay iska ilaaliyaan in ay ku dhintaan ayda dhexdooda, dabcan. Waana la odhan karaa waa kuwo wanaagsan oo wax raadsada. Sidaa darteed, waa kuwo aan waxba la yeelin.
“Ragga wax khiyaama waa kuwo aad iyo aad u sir badan, waana kuwo magac la baxay oo ku talaxtagay gabayga. Waxay isticmaalaan khiyaamo, waana kuwo had iyo jeer ku hawlan sidii ay dadka kale u khiyaami lahaayeen, iyagoo isticmaalaya erayo iyo hadalo aad u sarraysa. Ragga wax khiyaama wax shaqo ah oo wanaagsan oo ay qabtaan ma jiraan, aan ka ahayn in ay dadka baraan dhaqan xun oo ku salaysan is aaminid la’aan iyo cilmiga khiyaamada ku dhisan.”
Shimbirtii iyadoo eegaysa gadaasheeda dibna u celinaysa baalasheeda, xoog ayeey u neefsatay. Neef xooggan ayaa hawadii qarisay. “Ugu dambayntii waxaa halkan ka jira boqortooyo. Boqorradu uma baahna in ay baryaan amaba ay wax khiyaamaan, inkastoo ay labadaba sameeyaan had iyo goor. Sida kuwa wax xada, waxay dhacaan hantida dadku ay iska leeyihiin iyagoo isticmaalaya xoog iyo awood. Waxba ma soo saaraan, haddana wax walba ayeey xukumaan. Adiguna, kaagan safarka ahoow ee aan wax badan ogaynoow ogoow ‘boqortooy- adan’ inta aadan afka la soo galin shimbirta? Haddii aad aragtid taallo qadiimi ah,” ayeey u fiirsatay shimbirtii haddana sii wadatay, “waxaad odhanaysaa bo- qorku waa wanaagsan yahay, maxaa yeelay, magaciisa ayaa taallada dusheeda lagu qoray. Midda kale, waad iska indhatiraysaa sida wacan ee aan u nadiifiyo taallada dusheeda.”
Yoonis ayaa hadlay, “Run. Berigii hore boqorrada qaarkood waxay ahaay- een cirfiidiin. Laakiin wakhtiga aanu hadda joogno dadku waxay doortaan madaxdooda oo ay u doortaan Golaha Guurtida. Waa ay ka duwan yihiin kuwii hore, maxaa yeelay, waa hagaag, maxaa yeelay, waa kuwo dadku ay doorteen.
“Golaha Guurtida la doortay waa ka duwan yihiin? Goow!” ayeey ku dhawaaqday shimbirtii cod cadho ay ka muuqato. “Caruurtu wali waxaa lagu koriyaa sheekoxariirooyinkii boqortooyada, iyo iyagoo marka ay waynaadaan wali waxa ay doonayaan ay tahay boqortooyada. Golahaaga Guurtida la doorto waxa keliya ay yihiin boqorro jira afar sanno iyo amiirado dadka xukuma labo sanno. Run ahaantii, waxay isku yihiin kuwo dawarsada, wax khiyaama, iyo iyagoo hela awood boqortooyo! Waa ay tuugsadaan, waana kuwo hantida dadka, tabarucaadooda, iyo codkoodaba ku hela mu’aamaraado; waa kuwa sameeya ammaanid been ah iyo khayaamid goor walba oo ay fursad u helaan;
waxay sameeyaan istustusnimo xooggan oo ayba ku xukumaan Jasiiraddan. Iyo iyagoo ku guulaystay dhaqankooda ku salaysan ku dulnoolaanshaha dadka kale, mar walba dadkayaga wax soosaara ee shaqaystana waxba nooma had- haan.”
Yoonis waa uu aamusay. Waxa uu hoos u soo eegay dhulkii ka hooseeyay ee dooxada ahaa, markaasuu madaxiisa u ruxay si xooggan. “Waxaan jeclaan lahaa in aan aado meel aan waxaas oo kale aysan ka jirin. Ma jiri kartaa meel iftiinka xorriyadu uu gaaray?”
Shimbirtii iyadoo kor u qaadaysa baalasheeda culus ayeey ka duushay laan- tii geedka ay ku fadhiday, Yoonis agtiisana soo fadhiisatay. Yoonis dib ayuu u booday, isagoo la yaabban weynaanteeda. Shimbirtii waa ay ku soo jan- jeedhsatay Yoonis, waxayna tahay culayskiisa labadiis.
“Waxaad doonaysaa in aad aragtid meel dadku ay xor yihiin? Meel wax walba loo sameeyo, maxaa yeelay, waa wax wanaagsan iyo meesha xoog loo isticmaalo isdifaacid oo keliya. Waxaad doonaysaa in aad ku noolaatid meel dadka madaxda ah, kuwa maamula iyo kuwa la maamulo isku si loola dhaqmo, sharciguna uu isku si u wada qabto kan wax maamula iyo kuwo la xukumo.”
“Haaheey, Haa!” ayuu la soo booday Yoonis.
Shimbirtii si fiican ayeey u fiirisay Yoonis. Yoonis Maskiin shimbirtii ag- teeda ayuu taagan yahay, si fiicana waxa uu u arkaa indheheeda aadka u weyn. Waxaa la moodaa in ay ku dhexjiraan jirkiisa, akhrinayaan maskaxdiisa, kana eegayaan in uu yahay mid daacad ah. “Waxaan qabaa in la heli karo. Ku soo bood dhabarkayga,” ayeey tidhi shimbirtii. Shimbirtii wax yar ayeey isleexisay dhulkana dhigtay baalasheedii.
Yoonis waa uu yara hakaday, isagoo soo xusuusanaya in hadda uun lagu yidhi aamin ficilka, ha aaminin hadalka. Maxaa ku kalifi kara in uu ku aamino naftiisa shimbir weyn baalasheed? Si kastaba ha ahaateey, meel dheer buu ka yimid maxaaba ka xumaan kara oo uu lumin karaa? Isagoo ku guulaystay in uu wax walba ogaado, Yoonis si taxadar uu ku jiro ayuu kor isu qaaday, si uu u gaaro lafaheeda jilicsan ee u dhexeeya shimbirta garbaheeda. Markii uu dareemay in uu ku dul fadhiyo shimbirtii waxa uu si fiican u saaray gacmihiisii. Shimbirtii si yara foolxun ayeey u dhaqaaqday. Islamarkiiba waa la kacday korna ula sii dhaqaaqday.
Iyagoo dulmaraya jasiiraddii dhusheeda, dabayshuna ay ku dhacaysay wa- jigiisa, Yoonis waxa uu dareemay farxad. Quruxda qorraxda dahab la moodka ah ayaa soo baxisay iftiin, iyadoo waaberi noqotay maalin cusubina ay timid. Badwayntiina oo dhanna waa ay ka horaysaa. Yoonis Maskiin waa uu fajacay, “Halkee baan u soconaa?”